के ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन सम्भव छ ? – Lokpati.com
प्रचण्ड अपराध अमेरिका नेपाली काँग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार नेकपा प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरी राशिफल पक्राउ केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु चितवन
बीबीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका वकिलहरूले बुधवार संसद्‍को तल्लो सदनमा हुने सुनुवाइमा भाग नलिने जनाएको छ।
संसद्‍को न्यायपालिकासम्बन्धी समितिलाई लेखेको पत्रमा कानुनी सल्लाहकार प्याट सिपोलोनीले निष्पक्षताको अपेक्षा राखेका राष्ट्रपतिले त्यसमा भाग लिन नसक्ने बताएका हुन्। अघिल्लो हप्ता समितिका अध्यक्ष जेरोल्ड नाड्लरले राष्ट्रपति ट्रम्पले सुनुवाइमा भाग लिनु पर्ने या गुनासो गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए।
ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भाग लिने वा नलिने विषयमा भने खुलाएको छैन। अहिलेसम्म मिति तय नभइसकेको उक्त सुनुवाइबारे अलग्गै प्रतिक्रिया जनाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।
पत्रमा के उल्लेख छ?
पोलिटिकोले छापेको उक्त पत्रमा संसद्‍को समितिले अनुसन्धानका क्रममा पूर्णरूपमा नियमित प्रकियालाई पालना नगरेको र आधारभूतरूपमा निष्पक्षता सुनिश्चित नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
ह्वाइट हाउसले सुनुवाइको तयारी गर्न पर्याप्त समय नदिइएको र प्रत्यक्षदर्शीबारे पनि जानकारी नदिइएको समेत बताएको छ। त्यो सुनुवाइ राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोल्दिमिर जेलेन्स्कीबीच जुन महिनामा भएको टेलिफोन कुराकानीबारे केन्द्रित हुनेछ।
उक्त फोन कुराकानीमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई डेमोक्र्याटका अग्रपङ्क्तिका उम्मेदवार जो बाइडन र विगतमा युक्रेनको एउटा ऊर्जा कम्पनीमा काम गरेका उनका छोरा हन्टरविरूद्ध अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए।
ट्रम्पले आफूले गल्ती नगरेको र आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको बताउने गरेका छन्। अघिल्लो हप्ता संसद्‍को गुप्तचरी हेर्ने समितिले प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको गोप्य बयान र दुई हप्तादेखि भइरहेका सार्वजनिक सुनुवाइहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएको थियो।
त्यसबारेको प्रतिवेदन डिसेम्बर ३ मा सार्वजनिक गरिने छ। न्यायपालिकासम्बन्धी समितिले राष्ट्रपतिले गरेका गलत कामहरू समेटिएको महाभियोगसम्बन्धी दफाहरू डिसेम्बरको सुरुबाट मस्यौदा गर्न थाल्ने ठानिएको छ। सुरुमा डेमोक्र्याटहरूको कब्जामा रहेको तल्लो सदनमा मतदान गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण रहेको सिनेटमा पेस हुनेछ।
सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमतबाट उनी दोषी ठहर भए ट्रम्प महाभियोग प्रक्रियाबाट पदबाट हट्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्। तर त्यस्तो परिणामको सम्भावना एकदमै न्यून रहेको बताइन्छ।
फेसअफ प्लस टु २०१९ का दोस्रो संस्करणमा सहभागी प्रतियोगी
सिरहामा गरीबलाई लालपुर्जा वितरण